Bogga ugu weyn Waa maxay Qaybaha Muhiimka ah ee Qorshaha Maaliyadeed ee 2022
Guul kasta oo wanaagsan oo nolosha la gaaro waxay u baahan tahay qorshe wax ku ool ah iyo shaqo dheeraad ah si loo gaaro yoolkaas ama yoolkaas gaarka ah. Qaybta maaliyadeed ayaa sidoo kale ku lug leh dhacdadan nolosha. Si aan u gaarno yool kasta ama ujeedo kasta oo la xiriira dhaqaalaheena, waxaan u baahanahay inaan yeelano qorshe hufan oo ku saabsan sida loo maro geeddi-socodka oo dhan.
Qorshe maaliyadeed oo wanaagsan ayaa ka koobnaan doona faahfaahinta muhiimka ah ee dhammaan dhaqaalahaaga. Ma waxaad isku dayeysaa inaad abuurto qorshe maaliyadeed laakiin ma garanaysid sida loo sameeyo? Maqaalkani waxa uu iftiimin doonaa wax kasta oo aan u baahanahay in aan ka ogaano qorshe maaliyadeed oo hufan iyo qaybaha muhiimka ah ee qorsheynta maaliyadeed si ay kuugu suurtagasho inaad gaarto yoolalka maaliyadeed.
Waa maxay Qorshe Maaliyadeed?
Waa maxay qorshaha maaliyadeed?
Maxay yihiin ujeedooyinka muhiimka ah ee qorshaha maaliyadeed?
1. Qiyaasta raasamaal
2. Samaynta siyaasad maaliyadeed oo hufan
3. Maaraynta khatarta
Waa maxay Muhiimadda Qorshe Maaliyadeed?
Waa maxay Qaybaha Muhiimka ah ee Qorshaha Maaliyadeed?
1. Warbixinta dakhliga
2. Warbixin qiimo leh
3. Qorshaynta Miisaaniyadda
4. Qorshaha maareynta khatarta
5. Qorshaha hawlgabka iyo lacagta gaarka ah
Oraahda maaliyadeed "marka lacagtu ay ogaato in ay ku jirto gacmo wanaagsan, waxay rabtaa inay ku sii jirto oo ay ku dhufato gacmahaas" waxay si toos ah uga hadlaysaa maareynta saxda ah ee lacagta iyo guud ahaan dhaqaalaheena. Si aan u awoodno inaan gaarno xorriyadda maaliyadeed iyo madaxbannaanida labadaba, waa inaan abuurnaa qorshe maaliyadeed oo hufan si adagna ugu hoggaansanno.
Qorshe maaliyadeed waa dukumeenti leh ujeedada kaliya ee ah u adeegida hage ahaan lacagtaada si ay kuugu suurtagasho inaad gaarto yoolalkaaga. Dukumeentiga maaliyadeed waa mid dhamaystiran wuxuuna bixiyaa qiimaynta hadda jirta ee gobolkaaga maaliyadeed, waxa uu ka kooban yahay wakhtigaaga dheer yoolalka dhaqaale iyo xeelado gaar ah oo la adeegsan doono si loo gaaro yoolalka la dajiyay.
Waxaad samayn kartaa qorshe maaliyadeed oo kuu gaar ah ama waxaad weydiisan kartaa caawimo qorsheeye maaliyadeed oo xirfad leh. Kahor intaadan bilaabin diyaarinta qorshahaaga maaliyadeed waxaa hubaal ah inay jiraan qaybo muhiim ah oo ka mid ah qorshaynta maaliyadeed oo ay tahay inaad tixgeliso. Qorshe maaliyadeed oo hufan ayaa awood kuu siin doona inaad si fiican u dhex marato isbaarooyinka maaliyadeed ee aan la filayn.
Habka qorsheynta maaliyadeed waxa uu ku lug leeyahay maaraynta dhaqaalaheena iyo go'aaminta qorshe maaliyadeed oo mustaqbalka fog iyadoo la isku dayayo in la hirgeliyo hab firfircoon oo caqabado maaliyadeed ah.
Qorshe maaliyadeed oo habboon ayaa si buuxda meesha uga saaraya welwel kasta oo aad qabtid
ku saabsan lacagta, hantidaada maaliyadeed, iyo baahiyahaaga dhaqaale iyo yoolalkaaga. Qorshaynta Maaliyadeed, marna laguma qabsan karo si la'aan wax kasta oo la xidhiidha maaliyadda sababtoo ah waxa ay adeegsan lahayd qalab hufan si ay kaaga suurtagasho inaad kaydsato oo aad maalgeliso lacagta mustaqbalka, gaar ahaan inta lagu jiro hawlgab ama xaalad degdeg ah.
Qorshaynta maaliyadeed waxa ay tixgalisaa baahiyaha mustaqbalka ee ganacsiga ama mashruuca marka loo eego maamul maaliyadeed oo hufan, ilaha dhaqaale ee abuurista, iyo maalgelinta.
Qorshaha maaliyadeed waa in uu leeyahay ujeedooyin uu diiradda saarayo dhammaan waxa uu qabanayo. The
Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee qorshaha maaliyadeed waa
Ujeedada bilowga ah ee qorshaha maaliyadeed waa in la qiyaaso raasumaalka loo baahan yahay si loo bilaabo mashruuc ama ganacsi. Qiyaasta loo baahan yahay raasumaalku waa in lagu baaraa laba siyaabood oo kala ah shuruudaha fog iyo kuwa dhaw. Shuruudaha raasamaalku waxay ku xidhan yihiin qiimaha hantida hadda jirta iyo tan go'an, kharashyada hawlgalka, iyo qorshaynta muddada dheer.
Ujeedada ugu muhiimsan ee qorshaha maaliyadeed waa in la abuuro siyaasad maaliyadeed oo hufan
hago dhaqdhaqaaqa lacagta caddaanka ah. Siyaasad maaliyadeed oo hufan ayaa ka hortagaysa soo saarista lacagaha aan loo baahnayn, markaa hubinta sare u qaadida maaliyadda. waxay sidoo kale ku hagi doontaa adiga ama shirkaddaada inaad gaartaan go'aamo aasaas u ah kobaca dhaqaalahaaga.
Qorshe maaliyadeed waxa uu awood u leeyahay in uu aqoonsado khataraha ama isbaarooyinka dhaqaale ee aad la kulmi karto mustaqbalka, sidaa awgeed waxa aad si degdeg ah wax uga qaban kartaa xaaladda. Qorshaha maaliyadeed wuxuu u adeegaa sidii istiraatijiyad ka-hortagga khataraha si loo hubiyo dhammaystirka habsami u socodka mashruuca ama yoolka maaliyadeed.
Waxaa jira fikrad khaldan oo caan ah oo ah in qorshaha maaliyadeed loogu talagalay oo keliya maalqabeenada iyo ganacsatada bilaabaya mashruucyo cusub. Qorshaha maaliyadeed ama habka qorshaynta maaliyadeed waxa shaqaaleysiin kara qof kasta oo ka soo jeeda faqiir, dabaqad dhexe iyo maalqabeeno. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay hab hufan oo uu u maareeyo dhaqaalihiisa oo uu ku gaadho yoolkiisa maaliyadeed.
Hoos waxaa ah muhiimada ay leedahay shaqaaleysiinta qorshe maaliyadeed oo hufan oo leh qaybo muhiim ah:
Waxay gacan ka geysataa ilaalinta xasilloonida dhaqaalaheenna iyadoo hubinaysa inay jirto dheelitirnaan macquul ah oo u dhexeeya soo-gelinta iyo ka-baxitaanka maaliyadda.
Waxay ka caawisaa qorsheynta yoolalka maaliyadeed ee mustaqbalka fog iyo gaaritaanka hadafyadan
taasoo horseedaysa kobaca nolosheenna dhaqaale.
Qorshe maaliyadeed oo hufan wuxuu saadaaliyaa khataraha iman kara wuxuuna caawiyaa ka hortagga.
Qorshaynta maaliyadeed waxa ay caawisaa kobaca guud ee ganacsigeena iyo dhaqaalaheena.
ARAG SIDOO KALE: Tusaalaha Qorshayaasha Ganacsiga Si uu kaaga Caawiyo Qoritaankaaga |
Ma waxaad isku dayaysaa inaad abuurto qorshe maaliyadeed oo hufan? Abuuritaanka qorshe maaliyadeed markii ugu horeysay waxay u ekaan kartaa hawl adag laakiin markaad fahanto qaybaha muhiimka ah ee qorshaynta maaliyadeed, waa hawl fudud.
Qorshayaasha maaliyadeed ma laha qaab guud iyadoo qorshe kastaa lagu hagayo yoolalkaaga iyo yoolalkaaga, inkastoo ay leeyihiin qaabab kala duwan waxay inta badan diiradda saaraan ujeeddooyin isku mid ah. Qaybaha muhiimka ah ee qorshaha maaliyadeed waa sifooyin kala duwan oo ay tahay in lagu tixgaliyo diyaarinta qorshaheena maaliyadeed si loo xaqiijiyo gaaritaanka yoolalka la dajiyay. Waxaa ka mid ah;
1. Bayaanka Dakhliga
Bayaanka dakhliga waxa kale oo loo yaqaan bayaanka faa'iidada iyo khasaaraha. Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha maaliyadeed. Waxa ay soo koobaysaa dhammaan kharashaadka, kharashaadka iyo dakhliga ka soo baxa wakhti cayiman. Waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee qorshaynta maaliyadeed maadaama ay muujinayso inta faa'iido ama khasaare ee aad ka samaynayso shakhsi ahaan ama shirkad. Warbixinta dakhliga waxaa lagu diyaarin karaa iyadoo la isticmaalayo lacagta caddaanka ah ama habka ururinta.
Qorshe kasta oo maaliyadeed waxa uu u baahan yahay dhibic tixraac, bayaanka qiimaha saafiga ah waa inuu noqdaa barta tixraacaaga. Bayaanka saafiga ah waa qayb ka mid ah qorshaha maaliyadeed oo ka kooban qiimahaaga saafiga ah kaas oo ah liiska dhammaan hantidaada Ie, dhammaan hantida qiimaha leh, maalgelinta iyo xisaabaadka bangiga iyo deymahaaga kuwaas oo ah amaahdaada, kaarka deynta, deynta ardayga iyo deymaha taagan. Bayaanka saafiga ah asal ahaan waa ka goynta hantidaada ee deymahaaga.
Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad ogaato inta saxda ah ee aad haysato oo aad horay u sii qorsheysato adigoo isticmaalaya tirooyinkaas.
Furaha qorsheynta maaliyadeed ee guuleysta waa miisaaniyad-dejin habboon. Ku kharash gareynta alaabta aan loo baahnayn waxay kaliya dhimaysaa dhaqaalahaaga, qorshe miisaaniyadeed oo habboon ayaa awood kuu siin doona inaad si caqli gal ah u isticmaasho kaliya waxyaabaha muhiimka ah.
Miisaaniyaddu waxa ay awood kuu siinaysaa in aad yool samaysato oo aad u socoto yoolka. Miisaaniyaddu waxay muhiim u tahay la socodka qulqulka lacagta caddaanka ah ee urur ama shakhsi ahaan. Miisaaniyada lacagta caddaanka ah waxaa shaqaaleysiiyay shirkado si loo go'aamiyo inay ku sii shaqeyn karaan waqti cayiman iyo in kale. Waxay ku siinaysaa dulmar guud oo ku saabsan dhammaan qulqulka lacagta caddaanka ah iyo ka bixidda urur ee muddo cayiman.
bood kasta oo togan waxa ay ku lug leedahay khatarta. Abuuritaanka qorshe maaliyadeed la'aanteed
isku dayga ah in la yareeyo khataraha mustaqbalka iyo xaaladaha degdegga ah waa sida dhibaato oo kale waqtigeeda ka hor inta aan la dilin.
Maareynta khatarta ah waa habka lagu falanqeynayo maalgashiga ama go'aanka maaliyadeed iyo ka shaqeynta yareynta suurtagalnimada khasaaraha ama ugu yaraan yareynta saameynta.
Aqoonta aan ku filnayn ee maaraynta khatarta waxay u horseedi kartaa cawaaqib dhaqaale oo weyn ganacsiyada iyo shakhsiyaadka marka la maalgashanayo. Markaad samaynayso qorshe maaliyadeed waxaa lagugula talinayaa inaad aqoon qoto dheer u leedahay maareynta khatarta gaar ahaan haddii aad shaqaaleysiiso qorsheynta maalgashiga maaliyadeed. Qorshaha maareynta khatarta waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee qorsheynta maaliyadeed.
Akhri ALSO: Kaydka Abaal-marinta Sare ee Khatarta Hooseeya 10 | Maalgashiga Hantida
Drew Carey waxaa lagu yaqaanaa inuu dhaho "Marka la eego yoolkaaga gaarka ah iyo waxa aad dhab ahaantii rabto inaad noloshaada ku sameyso, waa inaysan waligeed xiriir la yeelan dowladda. Waa inaadan waligaa ku tiirsanayn dawladda hawlgabkaaga, badbaadadaada dhaqaale. Haddii aad sameyso, waa lagugu dhuftey."
Tani waxay ina xasuusinaysaa muhiimada ay leedahay in la yeesho qorshe hawlgab ama qorshe dhaqaale oo gaar ah oo loogu talagalay badbaadadayada maaliyadeed. Qorshaha hawlgabku waa qorshe tallaabooyin badan leh oo loo baahan yahay si loo helo hawlgab raaxo leh. Qorshaynta hawlgabku waxay u baahan tahay qorshe hore si aad u gaadho yoolalkaaga hawlgabka.
Haysashada qaybtan muhiimka ah ee qorshahaaga maaliyadeed waxay meesha ka saaraysaa ku tiirsanaanta kaalmada dawladda sida Medicare maadaama aad dhaqaale ahaan deggan tahay oo aad awoodid inaad ku raaxaysato la'aanteed kaalmada dawladda.
Waa maxay ujeeddada ugu weyn ee qorsheynta maaliyadeed?
Qorshe maaliyadeed waxa loola jeedaa inuu kaa caawiyo qorsheynta iyo habaynta dhaqaalahaaga si aad u gaadho yoolalka mustaqbalka dhow iyo kuwa fog labadaba.
Maxay yihiin tillaabooyinka ugu horreeya ee la qaado ka hor inta aan la diyaarin qorshe maaliyadeed?
Waa inaad marka hore aqoonsata hadafka iyo yoolka qorshaha maaliyadeed ka hor inta aanad xisaabin qiimaha saafiga ah oo aanad aqoonsan caadooyinka kharash-garaynta ee aan caafimaadka qabin ee meesha laga saarayo.
Ma abuuri karaa qorshe maaliyadeed la'aanteed caawinta qorsheeye maaliyadeed?
Haa, waxaad abuuri kartaa qorshahaaga maaliyadeed shakhsi ahaan laakiin haddii ay u muuqato mid aad u adag waxaad mar walba qori kartaa qorsheeye ganacsi oo ku caawiya.
Waa maxay qaybta muhiimka ah ee qorshaha maaliyadeed?
Qorshe kasta oo maaliyadeed oo gaar ah waxa loo habeeyey inuu ku habboonaado yoolka shakhsi ama urur laakiin waxay la mid yihiin qorshayaasha miisaaniyadda iyo qorshayaasha hawlgabka.
Waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka qorshe maaliyadeed?
Qorshe maaliyadeed oo hufan ayaa kaa caawin doona sidii aad u sugi lahayd ammaanka maaliyadda iyo inaad ka fogaato ku dhicida deynta.
Qaybaha kala duwan ee qorshaha maaliyadeed waxa ay gacan ka geystaan ​​maaraynta hufan iyo xakamaynta dhaqaalaheena. Qorshaha miisaaniyada ayaa kaa caawin doona inaad ka hortagto kharashaadka aan loo baahnayn markaad maalgelinayso oo aad hubinayso mustaqbalkaaga maaliyadeed. Qorshe maaliyadeed waxaad ku geli kartaa halka aad joogto iyo meesha aad rabto inaad joogto dhawrka sano ee soo socda. Waxay ina siinaysaa yoolal iyo xeelado aan u isticmaalno si aan ugu dadaalno inaan gaarno.
10 Majalado Maaliyadeed ee ugu Fiican Online Go'aannada Ganacsiga Xog -ogaalka ah ee 2021
Aaladaha Qorsheynta Maaliyadeed ee ugu Fiican ee la Isticmaali karo 2022
Dib -u -eegista Heerka Lacagta 2022: Barnaamijyada, Sida ay u shaqayso, Sharci ama Fadeexad
Mid ka mid ah xeerarka lacagta ee soo jireenka ah ayaa ina baraya inaan barto sida loo yareeyo kharashaadka kadibna loo barto…